जापानी आचरण र सीमा शुल्क! जापान जाँदै छ कि जान्नका लागि आधारभूत ज्ञान - Best of Japan
जापान आउने धेरै विदेशी पर्यटक जापानी आचरण र चलन बुझ्ने कोशिस गर्छन्। जापानी दृष्टिकोणबाट, म धेरै खुसी छु कि तपाईले हामीलाई त्यस्तो बुझ्नु हुनेछ। जहाँसम्म, यदि तपाईं घबराउनुहुन्छ कि तपाईं हाम्रा नियमहरू पालना गर्नुहुन्छ, त्यो चिन्ता अनावश्यक छ। हामी आशा गर्दछौं कि तपाई आराम गर्नुहोस् र जापानको आनन्द लिनुहोस्। कृपया यसको बारेमा सोच्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म जापानी आचरण र सीमा शुल्क प्रस्तुत गर्नेछु। मँ चाहन्छु कि तपाईंले जापानी शिष्टाचार र चलनहरू कडासँग सिक्नुहोस्। मलाई आशा छ कि तपाई जापानको बानी-बेहोरा र प्रचलनहरूमा चासो राख्नुहुनेछ र जापान आउने आशा गर्नुहुनेछ।
यदि सम्भव छ भने कृपया जापानी शिष्टाचार र चलनहरूको आनन्द लिनुहोस्
सिफारिश सम्बन्धित भिडियो
मलाई जापानी जनताको मुख्य बेहोरा र चलनहरूको बारे म तपाईंलाई ठोस तरीकाले देखाउँछु।
जब तपाईं जापानमा पुग्नुहुन्छ, तपाईंले पहिले याद गर्नुहुनेछ कि जापानी प्राय: धनु पर्छ। बोइ deeply्ग जापानी जनताको जीवनमा गहिरो जरा छ। हामी नजिकका साथीहरुलाई पनि अug्गालोको लागि प्रयोग गरिएको छैन। मलाई लाग्छ कि जापानमा बसिरहेको बेला तपाईंले जापानी अ h्गालेको दृष्टि देख्नुहुन्न। जापानीहरु चिसो मान्छे छैनन्। जापानी मानिसहरु झुकाएर अरूलाई आफ्नो चिनारी र सम्मान व्यक्त गरे। निम्न चलचित्रले तपाईंलाई जापानी बोडि aboutको बारेमा राम्रोसँग बताउनेछ।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यो जापानी बोइ habit बानीले जापानमा बस्ने पशुहरूमा प्रभाव पार्दछ। नर शहर मा नारा पार्क मा बस्ने हिरण पक्कै धनु पर्छ यदि तपाईं झुक्नुहुन्छ!
राम्ररी लाइन अप गर्नुहोस्
जापान मा, हामी एक ट्रेन सफाइन गर्दा वा कुनै कार्यक्रममा भाग लिँदा हामी सफासँग लाइनको व्यवस्था गर्नेछौं। हामीलाई थाहा छ यदि हामी प a्क्ति बनाउँछौं भने हामी लडाई नगरी पूरा हुने आशाको आशा गर्न सक्दछौं।
उदाहरण को लागी, जब हामी स्टेशनको घर मा ट्रेन मा चढ्छौं, हामी ट्रेन सँगसँगै कुर्ने छौं। जब ट्रेन आउँदछ, पहिले ट्रेनबाट मानिसहरू आउँदछन्। हामी पछाडि ट्रेनमा चढ्नेछौं।
अवश्य पनि, युवाहरू लाममा लाम लाग्छ। तिनीहरू विनम्रतापूर्वक लाइन लगाउँछन्, जे भए पनि तिनीहरू जस्तो देखिन्छन्।
जापानी शैलीको घरका जुत्ताहरू फ्याँक्नुहोस्
अर्को, म जापानी शैलीको भवनहरूमा शिष्टाचारहरूको बारेमा परिचय दिनेछु। निम्न भिडियोहरूले जापानी शैलीको घरहरूमा शिष्टाचारको बारेमा धेरै बताउँदछन्।
जापानी शैलीको भवनहरूमा, धेरै जसो अवस्थामा टाटामी मैट राखिन्छन्। माटोको खुट्टाको साथ टाटामी मैटहरू नलगाउन, हामी प्रवेशद्वारमा जुत्ता खोल्छौं र भवनमा प्रवेश गर्छौं।
हालसालै जापानी घरहरूमा टाटामी मैटको सट्टा गलैंचा र बोर्ड बढ्दै छ। जे होस्, हाम्रो जुत्ता प्रवेशद्वारमा खोल्ने बानी हराउने छैन।
यदि तपाईं एक जापानी शैली सरायमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईंले प्रवेशद्वारमा आफ्नो जुत्ता खोलिन सम्झनु पर्छ। यदि तपाइँ एक जापानी रेस्टुरेन्ट वा जापानी शैली पब "Izakaya" भनिन्छ, तपाइँ कर्मचारीहरु द्वारा प्रवेश मा आफ्नो जूता बाहिर लिन को लागी सोध्न सक्छ।
जापानी शैली भवनमा यस बाहेक बिभिन्न शिष्टाचार छन्। यद्यपि, मलाई लाग्छ कि विदेशबाट आएका मानिसहरुका लागि जापानी मानिसहरु एकदम विस्तृत शिष्टाचारको रक्षा गर्न चाहँदैनन्।
यदि तपाईंले जापानमा जापानी स्टाफबाट केहि प्राप्त गर्नुभयो, यदि सम्भव छ भने, कृपया मुस्कानको साथ "धन्यवाद" भन्नुहोस्, यो अंग्रेजीमा पर्याप्त छ। जापानी मानिसहरु अंग्रेजी मा "धन्यवाद" बुझ्दछन्। यदि तपाईंले जापानीलाई मुस्कान देखाउनुभयो भने, तपाईंलाई जापानको राम्रो बेहोरा थाहा छैन भने पनि जापानीहरूले नम्र सेवा गर्नेछन्।
जापानी शिष्टाचार र चलनहरू जान्न तल सिफारिस गरिएका भिडियोहरू छन्। जे होस्, जब तपाईं जापान आउनु हुन्छ, तपाईले यी भिडियोहरूमा प्रस्तुत गरेको जापानी भाषाको स्थानीय नियमहरू मास्टर गर्नुपर्दैन। हामी बुझ्दछौं कि तपाईंसँग तपाईंको तरिका पनि छ र हामीसँग शिष्टाचार पनि छ। हामी जान्दछौं कि तपाईं हाम्रो तरिका राम्रोसँग जान्नुहुन्न। त्यसोभए चिन्ता नगर्नुहोस् यदि तपाइँ जापानी तरिका अपनाउनुहुन्छ। जापानी शिष्टाचारको सारमा अन्य व्यक्तिहरूसँग मित्रता गाँस्ने इच्छा छ। हामी तपाईंसँग मिलेर जान चाहन्छौं, त्यसो भए कृपया जापानको आनन्द लिनुहोस्!